Miss Fairy The Emperor Tamer - Webtoon Korean Manhwa - Manhua - Manga နှင့် Light Novel အွန်လိုင်းကို အခမဲ့ဖတ်ပါ။
Miss Fairy The Emperor Tamer ပျမ်းမျှ0/5ထဲက 0
စိတ်ကူးစိတ်ကမ်း, လိမ်နေတာ, ပင်းပင်းဇွန်, စိတ်ကူးယဉ်သီချင်း
Canary Yun Mian, the Fairy of Fertility, in charge of reproduction and pregnancy…have been givenamission impossible. It is said that the son of Emperor Feng Xiao will be the ruler of the mortal world. Yu Mian must guarantee the birth of this child. However, she finds out that the Emperor shows no interest in his concubines because… he is impotent. Meanwhile, Emperor Feng Xiao gets to notice the maid disguised by Yun Mian and find her very attracting…
MangaToon သည် ဤအကြောင်းအရာကို ထုတ်ဝေရန် iReader ထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီး၊ အကြောင်းအရာသည် စာရေးသူ၏ ကိုယ်ပိုင်အမြင်ဖြစ်ပြီး MangaToon ၏ ရပ်တည်ချက်ကို ကိုယ်စားမပြုပါ။
အခန်းကြီး 443days ago
အခန်းကြီး 433days ago
အခန်းကြီး 42 ဇန်နဝါရီလ 14, 2022
အခန်းကြီး 41 ဇန်နဝါရီလ 12, 2022
အခန်းကြီး 40 ဇန်နဝါရီလ 12, 2022
အခန်းကြီး 39 ဇန်နဝါရီလ 12, 2022
အခန်းကြီး 38 ဇန်နဝါရီလ 12, 2022
အခန်းကြီး 37 ဇန်နဝါရီလ 12, 2022
အခန်းကြီး 36 ဇန်နဝါရီလ 12, 2022
အခန်းကြီး 35 ဇန်နဝါရီလ 12, 2022
အခန်းကြီး 34 ဇန်နဝါရီလ 12, 2022
အခန်းကြီး 33 ဇန်နဝါရီလ 12, 2022
အခန်းကြီး 32 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး 31 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး 30 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး 29 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး 28 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး 27 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး 26 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး 25 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး 24 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး 23 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး 22 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး 21 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး 20 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး 19 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး 18 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး 17 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး 16 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး 15 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး 14 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး 13 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး 12 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး 11 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး 10 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး9ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး 8 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး7ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး6ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး5ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး4ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး3ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး2ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး 1 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
ဇန်နဝါရီလ 10, 2022